Mitemo & Maitiro | Mutemo Makambani Dubai
Ndokumbirawo uverenge zvinotevera zvakanaka, sezvo chiri chibvumirano chinosunga pakati pako neLegal Bridge. Kana iwe uri pasi pemakore gumi nemasere (18), unogona kusashandisa Legal Bridge. Nekushandisa Legal Bridge unobvuma kusungwa neMitemo iyi yekushandisa. Kana iwe usingagamuchire aya mamiriro uye mamiriro, unogona kusashandisa Legal Bridge.
Chii chinonzi Legal Bridge? Legal Bridge iri tekinoroji yehunyanzvi (webhusaiti portal) yekutaurirana pakati pemagweta nenhengo dzevanhu vakuru. Legal Bridge haipe zano rezvemitemo. Magweta anowana Legal Bridge havasi vashamwari veLegal Bridge, vashandi kana vamiririri; ivo mapato echitatu. Legal Bridge haikurudzire kana kutsigira chero gweta pane ino webhusaiti, uye haigone garandi kana garandi yavo magwaro kana hunhu. Iwe une basa rekuitisa iwe pachako kushingairira nezve chero gweta. Hapana Gweta-Hukama hwehukama hwakaitirwa kana kuumbwa pakati pako neLegal Bridge nekushandisa kwako Legal Bridge. Kunyangwe Legal Bridge inogona kuita kuti kubvunzana zviri pamutemo pamhepo pakati pako negweta, Legal Bridge haisi bato pachibvumirano chekumiririra chaungapinda negweta. Saizvozvo, iwe unobvuma kuti Legal Bridge haina mutoro kune chero zviito kana kusiiwa kwemagweta. Legal Bridge haibvumire kana kukurudzira mamwe magweta. Usati wachengeta chero gweta kana kukumbira kubvunzana negweta paLegal Bridge, unofanirwa kunyatso tarisa ruzivo uye ruzivo rwegweta. Kana iwe ukachengeta masevhisi egweta kupfuura kubvunzana paLegal Bridge, iwe unofanirwa kukumbira chibvumirano chakanyorwa chevashandi vepamutemo chinotsanangura mamiriro uye mamiriro ekumiririra, kusanganisira mari dzese, mari uye zvimwe zvisungo. Legal Bridge haina basa rekuona kuti ndiani, magwaro kana magweta anowana Legal Bridge inosanganisira, asi isina kuganhurirwa, ruzivo rwuri mumaprofayiri egweta, senge zita remagweta, kambani yemagweta, zita, ruzivo rwekuonana, kumashure pakudzidza, kubhawa kubvumidzwa, kudzidzira nzvimbo kana chero rumwe ruzivo. Legal Bridge haina mutoro wekutarisa, kugadzirisa, kugadzirisa kana kuongorora ruzivo rwehuwandu. Legal Bridge haina basa rekubvunza kana kuongorora kana magweta aine inishuwarenzi kupokana nekuregeredza kwehunyanzvi kana kuita zvisirizvo. Iwe une basa rekuitisa iwe pachako kushingairira maererano nekuzivikanwa kana hunhu hwerimwe gweta. Kunze kwekunge zvatsanangurwa pano, "Bhiriji reMutemo" rinoreva Zambuko rezveMutemo uye webhusaiti yewagwetaua.com
Mushandisi Kutaurirana. Legal Bridge inzvimbo yevasiri-magweta nemagweta (pamwe chete "Vashandisi") kuti vataure. Vashandisi vewebhusaiti, kwete yepamutemo Bridge, vanopa zvirimo mukutaurirana. Legal Bridge haisi pati kune kutaurirana pakati peVashandisi. Legal Bridge haina basa rekugadzirisa, kugadzirisa, kusefa, skrini, kuongorora, kutsigira kana kuvimbisa kutaurirana pane ino webhusaiti. Legal Bridge inorambidza zvese zvisungo zvemukati mechero kutaurirana pakati peVashandisi pawebhusaiti kana zviito zvaunogona kutora kana kurega kutora semhedzisiro yekutaurirana kwakadai. Iwe ndiwe wega une basa rekuongorora uye kuongorora humbowo uye kuvimbika kwesosi uye zvemukati mechero kutaurirana.
Legal Bridge haibate mutoro wekusimbisa, uye haimiririri kana garandi maererano, kuzivikanwa kana kuvimbika kwegweta chero ripi zvaro kana asiri gweta kana zvirimo zvechero kutaurirana kuri pawebhusaiti. Sekushandiswa kwazvino, kutaurirana kunosanganisira, asi hakuna kuganhurirwa kune, chero kutaurirana kunongedzwa kwauri kubva kune chero Mushandisi zvakananga kana zvisina kunangana zvine chekuita neino webhusaiti. Kutaurirana kunosanganisira, asi hakuna kuganhurirwa, kutaurirana nemagweta paLegal Bridge, kusanganisira ruzivo rwehuwandu. Kutaurirana pane ino webhusaiti kune mashoma, hakubatanidze mu-munhu ongororo kana kushanya, uye usasanganisira zvidziviriro nemaitiro anowanzoitwa mu-munhu ongororo uye kushanya. Zvisinei nezvataurwa pamusoro apa, Legal Bridge ine kodzero, asi haimanikidzwa, kurambidza kana kudzima chero kutaurirana paLegal Bridge. Kana nyaya yako yepamutemo ichisanganisira inogona kunge iri kumatare edzimhosva, zvakakosha kuti uone kuti mhosva inofanira kumhan'arwa, kana kupindurwa, mukati menguva yakati kana kodzero dzako dzingave dzakakanganiswa. Naizvozvo, kana gweta rikaramba kukumiririra, unokurudzirwa kuti ubvunze nekukurumidza rimwe gweta kuti uchengetedze kodzero dzako. Sarudzo yegweta yekusamirira iwe haifanire kutorwa newe sechirevo maererano nezvakakodzera mhaka yako. Legal Bridge inoratidzira maforamu uko Vashandisi vanogona kutora chikamu munhaurirano yezvemitemo, kukurukura nezvakakodzera zvemagweta kana mimwe misoro isiri yakavanzika. Kutaurirana kunogona kusadzivirirwa pakuratidzirwa negweta-mutengi mukana kana dzimwe dzidziso dzerombo.
Kuvanzika; Ropafadzo. Legal Bridge inogona kusanganisira maforamu ekupindirana uye zvinhu zvisina kukodzera kukurukura ruzivo rwakavanzika kana zano rezvemitemo. Chakavanzika ruzivo runogona kusanganisira, asi haruna kuganhurirwa kune, zita rako, ruzivo rwekuonana, kuratidza ruzivo nezve vamwe vanhu kana masangano, humbowo kana kubvumidzwa kwemutemo wevanhu kana mhosva, kana rumwe ruzivo nezvezvinhu zvako zvemutemo. Zvinangwa zvemaforamu uye maficha paLegal Bridge ndiko kukurukurirana kwemutemo nezvikwanisiro zvemagweta. Zvepamutemo Bridge harisi basa rekuzivisa nemaune kana kusaziva kwemashoko akavanzika. Izvo zvinokwanisika kuti chero kutaurirana pane ino webhusaiti kunogona kugamuchirwa kana kubatwa nevechitatu mapato, kusanganisira vasiri-magweta, nekuda kwekutyora kwekuchengeteka, kusashanda zvakanaka kwesisitimu, kugadzirisa saiti, kana zvimwe zvikonzero. Vashandisi vewebhusaiti ino vanofunga njodzi yekuti kutaurirana kwavo kunogona kugamuchirwa nevechitatu uye vangangodzivirirwa pakuratidzwa nemumiriri-mutengi rombo kana dzimwe dzidziso dzerombo, uye vanobvuma kusabata Mutemo Bridge zvine mhosva muzviitiko zvakadaro. Ruzivo nemasevhisi anopiwa neLegal Bridge ndezvezvivakwa uye Mushandisi anobvuma kuti haasi mukwikwidzi weLegal Bridge uye anobvuma kusagovana ruzivo rwakadai kune chero vanokwikwidza veLegal Bridge. Unobvumawo kuti kukuvadzwa kwemari kutyora chikamu ichi kunogona kunge kusingakwanise uye kuti Bridge rezveMutemo richava nemvumo yekununurwa, pasina chinodikanwa chekutumira bond. Ichi chikamu chichapona chero kumiswa kwechibvumirano ichi kwenguva yemakore maviri (2), kana kwenguva yakareba sekuti ruzivo rwuri kubvunzwa ruchiri chakavanzika chekutengeserana pasi pemitemo nemirau inoshanda, chero nguva iri yakareba.
Zvemutemo Mibvunzo. Zvemutemo mibvunzo neVashandisi ("Mhosva") paLegal Bridge inogona kuwanikwa nevechitatu mapato uye / kana kutumirwa tsamba kune vechitatu magweta nevasiri magweta. Vashandisi havafanirwe kuendesa kana kutumira ruzivo rwavasiri kuda kuzivisa kuruzhinji. Magweta asiri kumiririra iwe, asiri-magweta, uye nhengo dzeveruzhinji vanogona kuwona Mhosva. Mhosva dzinogona kunge dzisina kudzivirirwa pakuratidzirwa negweta-mutengi mukana kana dzidziso yechigadzirwa. Kuendesa ruzivo rwakavanzika kana rwekupa mhosva dzinogona kushandiswa kupokana newe seumboo kana kubvumidzwa kwemhosva yevagari kana mhosva. Vashandisi vanoendesa Mhosva vanobvuma kufonerwa nemagweta nevechitatu mapato, kusanganisira Legal Bridge. Gweta mhinduro dzinogona kuwanikwa nevechitatu mapato uye / kana kutumirwa tsamba kune vechitatu mapato kusanganisira magweta nevasiri magweta. Nekudaro, Legal Bridge inochengetera kodzero yekusaburitsa, kusatumira email, kana kugadzirisa kana kudzima chero Nyaya, uye tinochengeterawo kodzero yekusaburitsa, kusatumira email, kana kugadzirisa kana kudzima chero mhinduro kune Chero Nyaya. Pa Legal Bridge, kubvunza-Vashandisi vanogona dzimwe nguva kunzi "Vatengi" uye gweta-Vashandisi vanogona dzimwe nguva kunzi "Gweta," "Gweta" kana "Gweta rako" kana "Gweta rako." Nekudaro, kunyangwe gweta nemutengi hukama huripo inogona kunge iri mubvunzo wechokwadi uyo unosiyana kubva pamasimba kuenda kune masimba, uye kushandiswa kwemazwi aya paLegal Bridge hakufanirwe kutorwa sekumiririrwa neLegal Bridge kuti gweta mutengi hukama huripo.
Yakatemerwa Makuriro Ekutanga Kubvunzana. Vashandisi vanogona kuita mashoma-chiyero chekutanga kubvunza pane Legal Bridge pamubhadharo. Legal Bridge inogona kushandiswa kutumira kutaurirana uye kubhadhara kwekuganhurirwa-chiyero kwekutanga kubvunza pakati pekubvunza-Mushandisi uye gweta-Mushandisi. Mari yacho inogona kupihwa-mvumo, kufambiswa, kuendeswa kana kudzoreredzwa nenzira inoonekwa seyakakodzera neLegal Bridge mune kwayo kwoga uye kugona kwakazara. Kubhadhara hakupi kupa kubvunza-Vashandisi kodzero yekugamuchira kutanga kubvunza kana mamwe masevhisi kubva kugweta-Mushandisi. Kubvunza-Vashandisi vanobvuma kuti gweta-Mushandisi ane mvumo yekubvisa kupihwa kwekutanga kubvunza pamberi kana mushure mekubhadharwa kunoitwa chero chikonzero, kusanganisira asi kusingagumi kune: kuzivikanwa kwekugona kana kupokana chaiko kwekufarira, kuronga makakatanwa, kana kana gweta-Mushandisi achitenda kuti iye haana hunyanzvi hwakakodzera hwekupa kubvunza kumubvunzo-Mushandisi. Vashandisi vanobvumirana kuti chero kubvunzana nezveLegal Bridge kwakatemerwa muchiyero kune zano rekutanga rinotungamirwa neruzivo rwunotumirwa neanobvunza-Mushandisi pane iyo Legal Bridge webhusaiti. Mubvunzi-Mushandisi anonzwisisa uye anobvuma kuti chero zano rakagamuchirwa nderekutanga mune zvakasikwa uye hazviite sechinotsiva kubvunzana mukati me-munhu uye kuongorora kwakazara kwenyaya negweta rinokwanisa. Mubvunzi-Mushandisi anonzwisisa zvakare uye anobvuma kuti panguva yekubvunzana kwekutanga paLegal Bridge, gweta-Mushandisi haakwanise kuwana ruzivo rwese rwunodiwa kuti ape rairo izere repamutemo kune anobvunza-Mushandisi, uye kuti chero zano rakagamuchirwa nekubvunza-Mushandisi saka kwekutanga mune zvakasikwa. Gweta-Mushandisi haazove nechisungo chekupa masevhisi epamutemo kupfuura chikamu chakaganhurirwa chekutanga kubvunza. Kana mubvunzi-Mushandisi akafunga kuchengetedza mamwe mabasa egweta-Mushandisi paLegal Bridge, iye anobvunza-Mushandisi anofanirwa kukumbira kuisa chibvumirano chakanyorwa chevashandi vepamutemo chinotsanangura mamiriro uye mamiriro ekumiririrwa, kusanganisira mari dzese, mari uye zvimwe zvisungo. Mapato ese anobvuma kuti Legal Bridge haisi bato kune chero chinomiririrwa chinogona kuitika kupfuura kwekuganhurirwa kwekutanga kubvunzana, uye vanobvuma kubata Legal Bridge isina njodzi kune chero kukakavadzana kunobva mukumiririra kwakadaro.
Gweta Nhengo. Gweta-Vashandisi vanogona kugadzira iyo Legal Bridge mbiri uye kuitisa kubvunzana paLegal Bridge. Mari dzinobva pakubhadharira kwekutanga kubvunza dzinogona kuiswa muaccount yebhangi yakasarudzwa negweta-Mushandisi. Zvakanakira gweta rega-Mushandisi ane mvumo yekuzvimirira pane hurongwa hwehunhu hwakasarudzwa negweta-Mushandisi. Gweta-vashandisi vanogona kudzima nhengo yavo chero nguva uye havana kodzero yekudzoserwa pane pro-rata kana imwe hwaro. Gweta-vashandisi vanobvuma uye vanobvuma kuti Legal Bridge ine mvumo yekudzokorora zvakanakira yega yega nhengo chirongwa chero nguva, uye kuti gweta-Mushandisi chete nzira yekumhanyisa kwakadaro kudzima kwavo kuve nhengo.
Mari dzebasa. Legal Bridge uye kana vanobatana navo vanogona kubvisa Mari dzeSevhisi kubva pakubhadharisa kunoitwa nekubvunza-Vashandisi vekubvunzana zvichibva padanho rehunhengo regweta-Vashandisi. Mari dzeSevhisi dzinogona kunge dzakaenzana ne50% yekubvunzana neVakuru Nhengo uye 20% yeVashandi Vemagariro. Mari dzeSevhisi dzinovakirwa pakushambadzira uye tekinoroji masevhisi anopihwa neMutemo Bridge. Vashandisi vanobvumirana kuti Mari dzeSevhisi dzakaringana uye zvine musoro. Zvepamutemo Bridge ingashandure mitengo yeSevhisi Fees chero nguva chero ipi chikonzero mune yayo yega uye yakakwana kugona.
Kubhadhara. Zvepamutemo Bridge inogadzirisa kubhadhara uchishandisa iyo Stripe online yekubhadhara chikuva. Vese Vashandisi vari kuita kana kugashira mari kuburikidza neLegal Bridge vanobvumirana neiyo Stripe mazwi ebasa anowanikwa pawww.stripe.com. Kuti uve nechokwadi chekusavhiringidzwa sevhisi uye kugonesa Vashandisi kutenga zvirinyore zvigadzirwa uye masevhisi, Legal Bridge uye / kana Stripe inogona kuchengeta yako nzira yekubhadhara pafaira. Ndokumbira utarise kuti ibasa rako kuchengetedza parizvino kubhadharisa ruzivo pane faira neLegal Bridge. Kubhadhara kubhadharisa masevhisi eVashandisi paPamutemo Bhiriji anopihwa neStripe uye ari pasi peStripe Yakabatanidzwa Akaundi Chibvumirano, icho chinosanganisira iyo Stripe Mitemo yeSevhisi (pamwe chete, "Stripe Services Chibvumirano"). Nokubvumirana nemitemo iyi kana kuramba uchishanda seMushandisi paBridge Bridge, unobvuma kusungwa neStripe Services Agreement, sezvo imwechete inogona kuchinjwa neStripe nguva nenguva. Sechimiro cheLegal Bridge inogonesa kubhadhara mabasa kuburikidza neStripe, unobvuma kupa Legal Bridge ruzivo rwakakwana uye rwakazara pamusoro pako nebhizinesi rako, uye unobvumidza Legal Bridge kuti igovane uye neruzivo rwekutengeserana zvine chekuita nekushandisa kwako kwekubhadhara mashandiro ekupa naStripe.
Basa Gweta Nezvekupokana, Kukwikwidza, uye Rezinesi. Wese gweta-Vashandisi vanofanirwa kuona kuti hapana kukakavara kwekufarira uye kuti gweta-Mushandisi anokwanisa kupa zvinehunyanzvi kutanga kubvunza kwakumbirwa. Mari inobhadharwa neyekubvunza-Mushandisi haina kubhadharwa kugweta-Mushandisi kudzamara kutanga kubvunzana kwaitwa. Nekudaro, kana paine nyaya inodzivirira gweta kubva mukukwanisa kupa kubvunza kwekutanga, gweta-Mushandisi ane chisungo chekukurumidza kupedzisa kubvunzana kwekutanga nekukasira uye kubvumira uyo anotsvaga-Mushandisi kuti agamuchire mari uye / kana kusarudza imwe gweta-Mushandisi. Vose gweta-Vashandisi vanopa mvumo yekuti vapihwe marezenisi ekudzidzira mutemo uye nekumira kwakanaka neako kana mamwe masangano ehurumende emabhawa muUnited States of America panguva yekugadzira Legal Bridge account uye panguva yekupa nekupa rubatsiro kune vanobvunza. -Vashandisi. Gweta-Vashandisi vanobvumirana kuti varega kupa nekupa masevhisi papuratifomu yeLegal Bridge uye kubvisa account yavo kubva kuLegal Bridge nekukasira kana rezenisi rake rekuita mutemo rakamiswa kana kubviswa.
Gweta Mamwe Mabasa. Pamusoro pemabasa ari pamusoro apa ane chekuita nemakakatanwa, kugona, uye rezinesi, gweta-Vashandisi vanobvuma kuti kana vakapa kupa chibvumirano chekutanga pamutemo paLegal Bridge, ipapo vanozopindura mukubvunza-Vashandisi nekukurumidza uye nekushingairira. Gweta-Vashandisi vanobvuma kuti vanozopedzisa kubvunzana kwekutanga uye voendesa nguva inobhadharwa mukati memazuva matatu (3) mushure mekunge mutengi abvumidza mubhadharo nekusarudza iyo Tumira Nguva sarudzo pane Meseji peji inosanganisira nhoroondo yekutaurirana neanobvunza-Mushandisi. Gweta-Vashandisi vanobvuma kuti vanorasikirwa chero kodzero yekugamuchira mubhadharo kana vasina kupedzisa kubvunzana kwekutanga uye kuendesa nguva nenguva yekupedzisira. Gweta-Vashandisi vanobvuma kuti kugutsikana kwemubvunzi-Mushandisi kwakavimbiswa, uye chero mhosva dzinopikisirwa chero chikonzero hadzibhadharwe.
Gweta Ethics Cherechedzo. Kana iwe uri gweta riri kutora chikamu mune chero chinhu chewebhu ino webhusaiti, unobvuma kuti iyo Mitemo yeUnyanzvi Mufambiro wenzvimbo dzaunobvumidzwa ("Mitemo") dzinoshanda kune ese mativi ekubata kwako uye kuti iwe uchazoteerera neMitemo iyi. Iyi Mitemo inosanganisira, asi haina kuganhurirwa, iyo mitemo ine chekuita nekuvanzika, kushambadzira, kukumbira vatengi, tsika isingabvumidzwe yemutemo, uye kunyeperwa kwechokwadi. Legal Bridge inodurura mutoro wese wekuteerera iyi Mitemo. Vashandisi vanobvuma kubata Legal Bridge isingakuvadzi chero kutyorwa kwetsika nemagweta anoshandisa ino webhusaiti. Magweta anobvumirana kuchengeta ruzivo rwese uye kutaurirana kunowanikwa kuburikidza newebhusaiti iyi zvakavanzika, kusanganisira asi kusingagumiri kune ruzivo rwezvinhu zvine chekuita nezveSevhisi Bridge masevhisi.
Zvikanganiso paKushandisa. Izvo zvirimo pane ino webhusaiti ndezvekushandisa kwako pachako chete uye kwete kwekushandisa zvebhizimusi. Iwe haugone kushandisa ino webhusaiti kuona kukodzera kwemutengi kune: (a) kiredhiti kana inishuwarenzi yezvako, zvemhuri, kana zvemumba zvinangwa; (b) basa; kana (c) rezenisi rehurumende kana bhenefiti. Iwe haugone kuodza, kudzosera mainjiniya, kukatanura, kubvarura, kubhadhara, kukwereta, kutengesa, sublicense, kana kugadzira zvigadzirwa zvinobva pane ino webhusaiti. Kana zvakare iwe kuti usashandise chero network yekutarisa kana yekutsvaga software kuti uone iyo saiti dhizaini, kana kuburitsa ruzivo nezve mashandisirwo, munhu anozivikanwa kana vashandisi. Iwe haugone kushandisa chero robhoti, dandemutande, imwe otomatiki software kana chishandiso, kana manyorerwo maitiro ekutarisa kana kuteedzera webhusaiti yedu kana izvo zvemukati pasina mvumo yedu yakanyorwa kare. Iwe haugone kushandisa ino webhusaiti kuendesa chero manyepo, anotsausa, ekunyepedzera kana zvisiri pamutemo kutaurirana. Iwe haugone kuteedzera, kugadzirisa, kuberekazve, kutsikisa, kugovera, kuratidza, kana kuendesa kune vekutengesa, vasina-purofiti kana zvinangwa zveveruzhinji zvese kana chero chikamu chewebhusaiti, kunze kwekubvumirwa pamusoro. Iwe haugone kushandisa kana neimwe nzira kuburitsa kana kuendesa zvekare iyi webhusaiti kana chero chikamu chayo, kana zvirimo zvichityora mitemo yekudzora kwekutengesa kunze nemirau yeUnited States of America. Chero kushandiswa kusingatenderwe kwewebhusaiti kana zvemukati zvinorambidzwa.
Hapana Kushandiswa Zvisiri pamutemo kana Kunorambidzwa. Semamiriro ekushandisa kwako webhusaiti reLegal Bridge, unobvumidza kuenda kuLegal Bridge kuti haushandise webhusaiti reLegal Bridge kune chero chinangwa chisiri pamutemo kana chinorambidzwa nemitemo iyi, mamiriro uye zviziviso. Iwe haugone kushandisa iyo Legal Bridge webhusaiti mune chero nzira inogona kukuvadza, kuremadza, kuremedza, kana kukanganisa iyo Legal Bridge webhusaiti kana kukanganisa chero imwe bato mashandisiro uye kunakidzwa kweLegal Bridge webhusaiti. Iwe haugone kuwana kana kuedza kuwana chero zvigadzirwa kana ruzivo kuburikidza nechero nzira dzisina kuitwa nemaune kuti dziwanikwe kana kupihwa kuburikidza nemawebsite eLegal Bridge. Legal Bridge inogona kungoshandiswa nekubvunza-Vashandisi uye gweta-Vashandisi nechinangwa chekuitisa kwekutanga pamutemo kubvunzana. Chero kushandiswa kweVashandisi vasiri kubvunza-Vashandisi kana gweta-Vashandisi izvo zvisina kuganhurirwa mukuitisa kwekutanga kubvunzana zviri pamutemo pamutemo zvakarambidzwa zvachose.
Kodzero Dzedu uye Mabasa. Legal Bridge haisi iye muparidzi kana munyori wezvekutaurirana zviri pamutemo kana zvemukati pane ino webhusaiti. Ino inzvimbo yekutaurirana pakati peVashandisi. Legal Bridge haina basa rekuongorora, kugadzirisa kana kubvumidza kutaurirana. Kunyangwe isu tisingakwanise kuita vimbiso yakakwana yekuchengetedzwa kwesystem, Legal Bridge inotora matanho ane musoro ekuchengetedza kuchengetedzeka. Kana iwe uine chikonzero chekutenda system chengetedzo yatyorwa, taura nesu neemail kuti ubatsirwe. Kana vashandi vezvemitemo veLegal Bridge vakaona kuti mafaera kana maitiro enhengo anova panjodzi yekushanda kwehunyanzvi kwesystem kana kuchengetedzeka kwenhengo, Legal Bridge inowana kodzero yekudzima mafaera aya kana kumisa iwo maitiro. Kana veLegal Bridge vashandi vehunyanzvi vachifungidzira kuti zita remushandisi riri kushandiswa nemumwe munhu asina kupihwa mvumo nemushandisi chaiye, Legal Bridge inogona kudzima mukana wemushandisi uyu kuitira kuchengetedza kuchengetedza system. Legal Bridge ine kodzero, mukuziva kwedu kwakazara uye kwakakwana, (i) kugadzirisa, kugadzirisa kana kuchinja zvimwe zvirimo, (ii) kurongazve chero zvirimo kuti zviiswe munzvimbo yakakodzera kana (iii) pre-screen kana bvisa chero zvemukati zvakatemwa kunge zvisina kukodzera kana neimwe nzira kutyora aya mazwi Ekushandisa, kusanganisira asi kwete kungogumira pane zvemukati zvine mutauro unogumbura uye kushambadza. Legal Bridge inochengetera kodzero yekuramba kushandira chero munhu uye kudzima mukana wevashandisi chero nguva. Unobvuma kuti Legal Bridge haina mutoro wekuchengetedza kana kuburitsa data rinoburitswa kana kuchengetwa paLegal Bridge. Unobvumirana kuti Legal Bridge haizosungirwa kuburitsa kana kupa ruzivo kana dhata rakaburitswa paLegal Bridge kune Iwe kana wechitatu mapato chero chikonzero.
Kodzero dzako uye Mabasa. Iwe uri pamutemo uye nehunhu unoona nezve chero kutaurirana kwaunoparidzira kana kuendesa uchishandisa ino webhusaiti. Iwe une basa rekuremekedza kodzero dzevamwe, kusanganisira zvehungwaru-pfuma kodzero (copyright, patent uye trademark), kodzero yekuvanzika uye kodzero yekusaregedzwa kana kucherwa. Iwe unopa mvumo kune Legal Bridge kune chero mabasa aunogadzira pane ino webhusaiti sechikamu cheyakajairwa backup nzira. Une mvumo yekubvisa chero emabasa ako kubva pawebhusaiti chero nguva. Kuendesa zvirimo kune chero zviitwa zvisiri pamutemo kutyora kweMitemo yekushandisa. Legal Bridge yakavhurika kune nhengo pasirese, uye Legal Bridge haigone kuvimbisa kuti hausi kuzopinda mumatambudziko epamutemo mune mamwe masimba pamusoro pekutaurirana kwako. Kana iwe uine chichemo pamusoro pehunhu kana kutaurirana kweumwe Mushandisi, ibasa rako kuyedza kugadzirisa gakava, kazhinji nekubata munhu iyeye zvakananga, kana zvichibvira. Kazhinji, Legal Bridge haizotora chinhanho mukugadzirisa kusawirirana pakati pako nevamwe Vashandisi. Dare repamutemo haritore mutoro wehunhu hwako kana hwevamwe Vashandisi. Zvisinei nezvataurwa pamusoro apa, kana kunyunyuta kwakadai kana kukakavara kukamuka, Mushandisi kana Vashandisi vanogona kukumbira kuti Bhiriji reMutemo ripindire uye rizame kugadzirisa gakava. Chero chikumbiro chakadai hachisi vimbiso yekuti Legal Bridge icha (i) pindira, (ii) kupindira nenguva, (iii) kugadzirisa gakava ichifarira rimwe bato kana rimwe kana (iv) kubudirira kugadzirisa mamiriro acho ezvinhu. Sarudzo yekupindira inogara neMutemo Bridge, mukuziva kwedu uye kwakakwana. Kusvika kwako kuLegal Bridge ndekwekushandisa kwako wega. Kana iwe uchida kugovera patsva kutaurirana kwaunowana pane ino webhusaiti, ibasa rako kuwana mvumo kubva kumunyori wekutaurirana (uye chero mumwe munhu ane kodzero). Unobvuma kubatsira kuchengetedza account yako uye kuchengetedzeka kwevamwe vashandisi nekuchengetedza password yako. Kana iwe uine chikonzero chekutenda kuti password yako yakanganiswa kana pakave nekumwe kusabvumidzwa kushandiswa kweakaundi yako, unobvuma kubata Legal Bridge nekukurumidza sezvazvinogona.
Zviri Mukati Zvisina Kukodzera. Paunenge uchiwana webhusaiti, unobvuma kusaisa, kurodha pasi, kuratidza, kuita, kuendesa kana neimwe nzira kugovera chero zvemukati izvo: (i) inoshoreka, inosvibisa, inonyadzisa, inonyadzisira, inoshusha kana kutyisidzira; (b) inotsigira kana kukurudzira hunhu hunogona kuita mhosva yematsotsi, zvichizadza mhosva yevagari vemo kana kutyora chero mutemo unoshanda munharaunda, nyika, nyika kana mutemo wekunze. kana (c) kushambadza kana neimwe nzira kukumbira mari kana kukumbira zvinhu kana masevhisi. Legal Bridge inochengetera kodzero yekumisa kana kudzima zvinhu zvakadaro kubva kumaseva ayo. Legal Bridge ichabatana zvizere nechero vanoita zvekuchengetedzwa kwemutemo kana vamiririri mukuferefeta chero kutyorwa kwemitemo yekushandisa kana mimwe mitemo inoshanda. Iwe unoregedza kodzero yekukumbira kana kuendesa zvinyorwa kubva kuLegal Bridge kusanganisira asi zvisina kuganhurirwa kune chero ruzivo kana dhata rinoburitswa paLegal Bridge chero chikonzero.
Zvinongedzo kune Yetatu Webhusaiti. Iyi webhusaiti inogona kunge iine zvinongedzo kune mawebhusaiti anotongwa nemapato asiri eMutemo Bridge. Legal Bridge inogona kupa zvinongedzo kune mamwe magwaro kana zviwanikwa zvisina kubatana nazvo. Legal Bridge haina basa uye haitsigire kana kubvuma chero mutoro wekuwanika, zvirimo, zvigadzirwa, masevhisi kana kushandiswa kwechero webhusaiti webhusaiti, chero webhusaiti inowanikwa ipapo kana chero shanduko kana kugadziridzwa kwenzvimbo dzakadai. Zvepamutemo Bridge haripe vimbiso nezve zvemukati kana mhando yezvigadzirwa kana masevhisi anopihwa nenzvimbo dzakadai. Legal Bridge haina basa nekutapa webhusaiti kana chero imwe nzira yekutapurirana inogamuchirwa kubva kune yechitatu webhusaiti webhusaiti. Kuiswa kwechero chinongedzo hakureve kutsigirwa neLegal Bridge yewechitatu webhusaiti webhusaiti, uye hazvireve kuti Legal Bridge inotsigira, yakabatana kana yakabatana, inovimbisa, kana inobvumidzwa zviri pamutemo kushandisa chero zita rekutengeserana, rakanyoreswa trademark, logo, chisimbiso chepamutemo kana chepamutemo, kana mucherechedzo wekopimendi unogona kuratidzwa mumatanho. Unobvuma kuti unotakura njodzi dzese dzine chekuita nekuwana uye kushandisa zvemukati zvakapihwa pane wechitatu webhusaiti uye unobvuma kuti Legal Bridge haina mhosva yekurasikirwa kana kukuvara kwerudzi rupi nerupi rwaunogona kubva mukubata nemumwe munhu.
Muridzi. Iyi webhusaiti ndeyayo uye inoshandiswa neLegal Bridge, LLC. Zvakanaka, zita rekuremekedza uye kufarira uye nezvinhu zvakapihwa pane ino webhusaiti, kusanganisira asi zvisingagumiri kune ruzivo, magwaro, marogo, magirafu, manzwi uye mifananidzo ndeyaRemutemo Bridge kana nevanyori vayo vechitatu, vashambadziri kana vatengesi. Kunze kwekunge zvataurwa pachena neLegal Bridge, hapana zvishandiso zvinogona kutevedzwa, kuburitswazve, kuburitswa, kuiswa, kuiswa, kuiswa, kuratidzwa, kuparadzirwa kana kugoverwa munzira ipi neipi uye hapana chinhu pane ino webhusaiti chichafungidzirwa kupa chero rezinesi pasi pechero yeLegal Bridge's kodzero dzepfuma, kungave neestoppel, zvinoreva kana neimwe nzira. Chero kodzero dzisina kupihwa pachena pano dzinochengeterwa neMutemo Bridge.
Kopiraiti. Yese webhusaiti dhizaini, zvinyorwa, mifananidzo, kusarudzwa uye kurongedzwa kwazviri, ndeveRemutemo Bridge, KODZERO DZESVONDO.
Zviratidzo. Zvepamutemo Bridge, mifananidzo yese uye zvinyorwa, uye ese mapeji emusoro, echinyakare magirafu uye mabhatani ma icon ndeemasaini mamaki, zviratidzo uye / kana dhizaini yekutengesa yeLegal Bridge, LLC. Zvese zvimwe zvitengesi, mazita echigadzirwa uye mazita emakambani kana marogo akanyorwa pano inzvimbo yevaridzi vawo.
Mhosva Disiki. Ruzivo, software, zvigadzirwa, uye masevhisi akaverengerwa mukati kana kuwanikwa kuburikidza neLegal Bridge.com webhusaiti inogona kusanganisira zvisiri izvo kana typographical zvikanganiso. Shanduko dzinowedzerwa nguva nenguva kune ruzivo ruri pano. Legal Bridge uye / kana vanobatana navo vanogona kugadzirisa uye / kana shanduko muLegal Bridge.com webhusaiti chero nguva. Zano rakagamuchirwa kuburikidza neRegital Bridge webhusaiti harifanire kuvimbwa pamisarudzo yako pachako, yekurapa, yepamutemo kana yezvemari uye unofanirwa kubvunza nyanzvi yakakodzera kune rimwe zano rakanangana nemamiriro ako. Legal Bridge uye / kana vanobatana nayo havaite chinomiririra pamusoro pekukodzera, kuvimbika, kuwanikwa, nguva, uye kunyatsoitika kweruzivo, software, zvigadzirwa, masevhisi uye mifananidzo inoenderana iri mune webhusaiti reLegal Bridge.com chero chinangwa. Kusvikira padanho rinotenderwa nemutemo unoshanda, ruzivo rwese rwakadai, software, zvigadzirwa, masevhisi uye mifananidzo inoenderana zvinopihwa "sezvazviri" pasina garandi kana mamiriro erudzi chero rupi zvaro. Zvepamutemo Bridge uye / kana vanobatana nayo pano vanoshora zvivimbiso zvese nemamiriro maererano neruzivo urwu, software, zvigadzirwa, masevhisi nemifananidzo inoenderana, kusanganisira zvese zvirevo kana mamiriro ekutengesa, kugwinya kwechimwe chinangwa, zita uye kusaputsa. Kusvikira pamwero wakakura unobvumidzwa nemutemo unoshanda, hapana chiitiko apo Legal Bridge uye / kana vanobatana navo vanova nemhosva kune chero yakanangana, isina kunanga, chirango, zvine njodzi, zvakasarudzika, zvinokuvadza zvinokonzeresa kana chero kukuvadzwa chero kusanganisa, pasina muganho, kukuvara kwekurasikirwa kwekushandisa , data kana purofiti, zvichibuda kana munzira ipi neipi zvine chekuita nekushandiswa kana kuitwa kwewebsite yeLegal Bridge.com, nekunonoka kana kutadza kushandisa webhusaiti reLegal Bridge.com kana mamwe mabasa anoenderana, kupihwa kana kutadza kupa masevhisi, kana kune chero ruzivo, software, zvigadzirwa, masevhisi uye mifananidzo inoenderana inowanikwa kuburikidza newebsite yeLegal Bridge.com, kana zvimwe zvinomuka nekuda kwekushandisa webhusaiti reLegal Bridge.com, kungave kuri pachibvumirano, kutambudza, kuregeredza, mutoro wakasimba kana neimwe nzira, kunyangwe kana Bhiriji rezveMutemo kana chero rimwe rayo rakabatana rakarairwa nezve mukana wekukuvara. Nekuti mamwe matunhu / masimba haatenderi kubviswa kana kuremerwa kwechikwereti chekukuvara kwakakonzerwa kana nenjodzi, muganho uri pamusoro uyu haungashande kwauri. Kana iwe usina kugutsikana nechimwe chikamu chewebsite yeLegal Bridge.com, kana nechero yeaya mazwi ekushandisa, mushonga wako wega uye wakasarudzika kurega kushandisa webhusaiti reLegal Bridge.
Hapana Waranti. Iyo saiti uye zvese zvishandiso, zvinyorwa kana mafomu akapihwa pane kana kuburikidza nekushandisa kwako saiti zvinopihwa pane "sezvazviri" uye "sezviripo" hwaro. Kusvikira pamwero wakazara unobvumidzwa nemutemo, Legal Bridge inotaura pachena zvese zvivimbiso zverudzi rupi zvarwo, kungave kuri kutaura kana kurehwa, kusanganisira asi kusingaganhurirwi kune zvirevo zvekutengesa, kugwinya kwechimwe chinangwa, zita uye kusaputsa. Zvepamutemo Bridge haripe garandi yekuti: (a) saiti kana izvo zvinhu zvinosangana nezvinodiwa zvako; (b) saiti kana izvo zvinoshandiswa zvichawanikwa pasina anovhiringidzwa, nenguva, yakachengeteka kana isina kukanganisa kukanganisa; (c) mhedzisiro inogona kuwanikwa kubva pakushandisa saiti, kana chero zvigadzirwa zvinopihwa kuburikidza nenzvimbo, zvichave zvechokwadi kana zvakavimbika; kana (d) kunaka kwechero zvigadzirwa, masevhisi, ruzivo kana zvimwe zvinhu zvakatengwa kana kuwanikwa newe kuburikidza nesaiti kana kuvimba nezvinhu zvichazadzisa zvaunotarisira. Kuwana chero zvigadzirwa kuburikidza nekushandisa saiti kunoitwa iwe pachako nekufunga uye panjodzi yako wega. Legal Bridge haizovi nemhosva yekukuvara kwekombuta yako kana kurasikirwa kwedhata kunobva mukuburitswa kwechero zvemukati, zvishandiso, ruzivo kana software.
Kuganhurirwa kweMutoro uye Kuregererwa. Iwe uchabata Legal Bridge uye maofficial ayo, madhairekitori, vashandi, nevamiririri vasina chakaipa uye unoremekedza Legal Bridge kune chero chisina kunanga, chirango, chakakosha, chakangoitika, kana chakakanganisa kukuvara, zvisinei zvinomuka (kusanganisira magweta fizi uye zvese zvine chekuita nemitengo nemitengo yematare. arbitration, kana kutongwa kana kukwidzwa, kana zviripo, kungave kana kwete kukakavara kana kuyananisa kwakamisikidzwa), kungave muchiito chechibvumirano, kuregeredza, kana chimwe chiito chinotambudza, kana kubuda kana maererano nechibvumirano ichi, kusanganisira pasina muganho. chero chirevo chekukuvara kwemunhu kana kukuvara kwepfuma, zvichibva muchibvumirano ichi uye nekutyorwa chero kwechero federal, nyika, kana mitemo yemuno, mirau, mirau, kana mirau, kunyangwe iri Legal Bridge yakamborayirwa nezve mukana wekukuvara kwakadai. Kana paine chikwereti chinowanikwa pachikamu cheLegal Bridge, chinozogumirwa pamari yakabhadharwa zvigadzirwa uye / kana masevhisi, kunze kwekunge zvichibvumidzwa zvichienderana nechibvumirano chekuyananisira kwemitemo yekushandisa, uye pasina mamiriro ezvinhu pachave neanotevera kana kukuvara kwechirango. Dzimwe nyika hadzibvumidze kubviswa kana kuremerwa kwekukuvara kwakangoitika kana kunotevera, saka kuregedzwa kuri pamusoro kana kusabvumirwa kunogona kusashanda. Hapana chiitiko chinofanira kunge chiri Bhiriji rezveMutemo, makambani aro anowirirana, kana vatungamiriri vekambani, vatungamiriri, nhengo, vashandi, vagovani, vanobatana navo, vanogoverana kana vamiririri vanozobhadharirwa mari yepamutemo kana zvisina kunangana, zvakakosha, zvine mutsindo, zvine mutsindo, zvemuenzaniso, kana kukuvadzwa kwechirango chero rudzi (kusanganisira, pasina muganho, chero kukuvara kwekurasikirwa nemari, purofiti, kushandiswa kana dhata), zvisinei zvakakonzerwa, kungave kutyora chibvumirano, kuregeredza kana pasi pechero imwe dzidziso yepamutemo, ingave ichionekwa kana kwete uye kana kana kwete Legal Bridge yakayambirwa nezve mukana wekukuvara kwakadai, uye zvisinei nekukundikana kwechinangwa chakakosha chechero mushonga unogumira. Vashandisi vanobvumirana kuti izvi zvipimo zvemutoro zvakabvumiranwa kugoverwa kwenjodzi uye zvinoratidzwa mumubhadharo unobvumiranwa nemapato. Kukanganisa kwechikwereti chakatarwa muchibvumirano ichi zvinhu zvakakosha zvehwaro hwekutengeserana uye Mapato haangapinde muchibvumirano chepamutemo chekupa sevhisi pasina Chibvumirano kune izvi zvisingakwanisike. KUNYANYA KUSUNGWA KWEZVINONESESWA KWEMUSHANDI KUSUNGWA KWEZVINHU ZVEZVINHU PAMUSORO CHIBvumirano, CHIMWE CHIMWE CHIMWE CHIMWE CHINOGONESESA KUNE VAMWE HACHIZVIMBISI CHIMWE CHIMWE CHINOBVADZWA NOMUSHANDI KUNYANYA BHURIDZI PAMUSORO PEKUTONGA KWEMAZUVA MATATU EMWEDZI, UYE NEKUMWE NEKUMWE NEKUMWE MUMWE MUNHU MADhora ($ 1,000.00).
Sarudzo yeMutemo. Nekushandisa ino webhusaiti, iwe unobvumirana pachena kuti kodzero dzako uye zvaunosungirwa zvinotungamirwa nekududzirwa zvinoenderana nemitemo yeHurumende yeCalifornia, kusanganisa sarudzo dzayo dzemitemo. Chero chiitiko chepamutemo kana kuenderera zvine chekuita nekuwana kwako kana kushandisa webhusaiti kunoitiswa neChipangano Chekupokana mune aya Mashandisiro. Aya mazwi Ekushandisa anoburitsa pachena uye anoregedza zviga zveChibvumirano cheUN cheChibvumirano chePasi rose Kutengeswa Kwezvinhu, icho chisingazoshandise kune chero chiitiko chakaitiswa kuburikidza kana neimwe nzira inosanganisira ino webhusaiti.
Kugadzirisa Gakava; Kupokana. Zvepamutemo Bridge uye iwe unobvuma kuyedza kugadzirisa makakatanwa ese zvisina kurongwa kwemazuva makumi matatu usati waisa kumatare. Kana isu tisingakwanise kugadzirisa gakava uye mazuva makumi matatu apfuura kubvira mapato ese ave nekuziva kwekuvapo kwegakava, Legal Bridge uye iwe unobvuma kumisikidza kukakavadzana kwese uye zvirevo pakati pedu pamberi pemutevedzeri mumwe chete. Mhando dzemakakatanwa uye zvirevo zvatinobvumirana nazvo zvinotarisirwa kuti zvidudzirwe. Izvo zvinoshanda, pasina muganho, kune: zvirevo zvinomuka zvichibva kana zvine chekuita nechero chinhu chehukama pakati pedu, chingave chakavakirwa muchibvumirano, mhosva, mutemo, kubiridzira, kumiririra zvisizvo, kana imwe dzidziso yepamutemo; zvirevo zvakamuka pamberi peizvi kana chero mazwi epamberi (kusanganisira, asi kwete kuganhurirwa, zvirevo zvine chekuita nekushambadzira); zvirevo izvo izvo parizvino zviri nyaya yekufungidzirwa kirasi yekuitisa makwikwi mauri usati uri nhengo yekirasi yakasimbiswa; uye zvirevo zvinogona kumuka mushure mekubviswa kwematemu aya. Nezvinangwa zveichi Chibvumirano cheArbitration, mareferenzi e "Legal Bridge," "isu" uye "isu" anosanganisira edu akapihwa subsidiaries, vanobatana, vamiririri, vashandi, vanotungamira mukufarira, vanomutevera, uye vanopa, pamwe nevose vanobvumidzwa kana vasina mvumo vashandisi. kana vanobatsirwa nemasevhisi kana zvigadzirwa pasi pematemu aya kana chero zvibvumirano zvisati zvaitika pakati pedu. Zvisinei nezvataurwa pamusoro apa, chero bato rinogona kuunza chiito chemunhu mudare rezvikwereti zvidiki. Unobvuma kuti, nekupinda mumatemu aya, iwe nePamutemo Bridge mune imwe neimwe muchirega kodzero yekutongwa nedare redzimhosva kana kutora chikamu muchiitiko chekirasi. Aya mazwi humbowo hwekutengeserana kana hwewebhu webhusaiti mukutengeserana kwepakati, uye nekudaro Federal Arbitration Act inotonga kududzirwa nekusimbisa kweichi chiitiko. Iyi arbitration inopa ichapona kugumiswa kweaya mazwi. Bato rinotarisira kuisa chiito mumatare madiki ematare kana kutsvaga arbitration rinofanira kutanga ratumira, neUS tsamba yakasimbiswa, ziviso yakanyorwa yekukakavadzana ("Cherechedzo") kune rimwe bato, inozonyorerwa ku: 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, County yeSussex (iyo "Kero Yekuzivisa"), uye kopi yemagetsi inofanira kutumirwa kuburikidza neemail kutsigira @ Legal Bridge.com. Cherechedzo inofanirwa (a) kutsanangura chimiro uye hwaro hwechikumbiro kana gakava uye (b) kuratidza kusunungurwa kwakatsvakwa ("Kuda"). Kana Legal Bridge uye ukasasvika pachibvumirano chekugadzirisa zvichemo mukati memazuva makumi matatu Chiziviso chatambirwa, iwe kana Bhiriji rezveMutemo mungatanga kuitirana mutongo. Panguva yekumhan'ara, huwandu hwenzvimbo ipi neipi yekugadzirisa inoitwa neLegal Bridge kana iwe haufanire kuziviswa kune arbitrator kusvikira mutongi asarudza huwandu, kana huripo, hwaunopihwa iwe kana Legal Bridge. Iyo arbitration ichatongwa neCommerce Dispute Resolution Maitiro uye maAdvolutionary Maitiro eVatengi Akaenderana Nharo (pamwe chete, iyo "Mitemo yeAAA") yeAmerican Arbitration Association (iyo "AAA"), sekushandurwa nemitemo iyi, uye ichaitwa. neAAA. Mitemo yeAAA inowanikwa online pawww.adr.org kana kufonera iyo AAA pa1-800-778-7879. Mutongi anosungwa nemazwi aya. Mutongi achatora danho rakanyorwa rine chikonzero chakakwana kuti atsanangure zvakawanikwa zvechokwadi uye mhedziso yemutemo wakapihwa mubairo uyu. Mapato anobvumirana kuti chero mibairo kana kutsvagirwa chokwadi kana mhedzisiro yemutemo inoitwa mukugadzirisa gakava ravo kana chikumbiro chinoitwa chete nechinangwa chekuyananisira uku, uye hazvigone kushandiswa nechero mumwe munhu kana chinzvimbo mune kumwe kunzwanana kwekupedzisira gakava kana chirevo chinosanganisira Legal Bridge. Mapato anobvumirana kuti mukukwikwidzana kupi nekupi kwekukakavara kana kuda, hapana bato rinovimba nemhedzisiro chero kupihwa mubairo kana kuwanikwa kwechokwadi kana mhedziso yemutemo wakaitwa mune kumwe kupokana kwekukakavadzana kana kudaidzira kuti Legal Bridge yaive bato. Mutongi anogona kupa zororo rekubatsira chete bato riri kutsvaga ruyamuro uye kusvika padanho rakakodzera kupa ruyamuro runotarisirwa nezvakataurwa nebato rega. IWE NEZVINHU ZVEZVINHU ZVINOBVUNZWA KUTI MUMWE MUMWE ANOGONA KUUTSA MHOSVA PAZVO PAMWE PAMWE PAKO KANA YAKO KANA YAKO MUNHU ANOGONESESA UYE ASI SEVANHU VANOFANIRA KANA Nhengo DZEMAHARA MUNYAYA DZIMWE DZAKADZIDZISWA KANA KUTI VANOMIRIRA VANOGONESESA KANA MUMWE MUNHU ANOGONESESA. Mutongi haazove nesimba rekuita zvikanganiso zvemutemo kana kufunga zviri pamutemo, uye mapato anobvumirana kuti chero mubairo wekurambidza unogona kusiiwa kana kugadziriswa pachikumbiro nechero nhengo kudare redzimhosva rine hunyanzvi hwekukanganisa kwakadaro. Bato rega rega rinotakura zvarwo nemari yazvo pachikumbiro chakadai. Arbitrator haazopa ruregerero rwakawandisa pane izvo zvinopihwa nemazwi aya kana kupa mubairo wekukuvara kana chero kumwe kukuvara kusingaenzaniswi nekukuvara chaiko. Zvakare, kunze kwekunge imi nePamutemo Bridge muchibvumirana neimwe nzira, muyananisi anogona kusasanganisa zvinopfuura zvinotaurwa nemunhu mumwe, uye haangatonge pamusoro pemhando ipi neipi yemumiriri kana kirasi inoenderera. Kana chirevo ichi chikawanikwa chisingamanikidzike, saka huwandu hwesarudzo iyi hunenge husina maturo. Zvese zvinhu zvekumhan'ara kuenderera, uye chero kutonga, sarudzo kana mubairo nemutongi, zvichave zvakavanzika, zvimwe kunze kwechikamu chekukwidza kudare redzimhosva rine masimba. Arbitrator, uye kwete chero federal, nyika, kana dare remuno kana agency, ichave nesimba rakakwana kugadzirisa chero gakava rine chekuita nedudziro, kushanda, kumanikidza kana kuumbwa kwechibvumirano ichi kusanganisira, asi kwete kuganhurirwa, chero chirevo chekuti zvese kana chero chikamu chechibvumirano ichi hachina maturo kana kushaya basa.
Kubviswa / Kugadziriswa kwekuwana. Legal Bridge inochengetera kodzero, mukufunga kwayo kwega, kumisa kupinda kwako kune webhusaiti reLegal Bridge.com uye masevhisi anoenderana kana chero chikamu chayo chero nguva, pasina ziviso.
Kugadziriswa. Legal Bridge ine kodzero yekushandura mazwi, mamiriro uye zviziviso zvinopihwa pasi pewebsite yeLegal Bridge, kusanganisira asi kwete kuganhurirwa kumitero inobatana nekushandiswa kweLegal Bridge webhusaiti. Ndiro basa rako kuongorora iyi Mitemo Yekushandisa nguva nenguva shanduko, idzo dzakaitwa pasina kukuzivisa iwe.
Kutenda. Nekushandisa masevhisi eLegal Bridge kana kupinda paLegal Bridge saiti, unobvuma kuti une makore gumi nemasere (18) ekuberekwa kana kupfuura, kuti iwe waverenga uye wanzwisisa aya mazwi ekushandisa, uye kuti unobvuma kusungwa nawo.